Izixhobo zamakhorali zilahlekelwa ngosayizi ongu-67% | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sibonile ezindatshaneni ezedlule, ukuguquka kwesimo sezulu Kubangela ukwanda kwamazinga okushisa olwandle ngenxa yokwanda kokuhlushwa kwe-CO2 emkhathini. I-CO2 yigesi yokushisa okugcina ukushisa kusuka elangeni. Ngokwandisa amazinga okushisa ezindaweni ezijulile zolwandle, izixhobo zamakhorali, ezisengozini enkulu, zihlangabezana nezinguquko ezingezinhle zomzimba nalokho okuthiwa ukwenza mhlophe.
Lokhu kukhishwa umbala kukhiqiza ukufa kwamakhorali futhi ngawo, zonke izilwane ezihlobene namakhorali zibona ukuthi amathuba azo okufihla nokondla anciphile. Ukwenza mhlophe nakho kubangela ukuncipha kokuzala yamakhorali akwazi ukusinda.
IGreat Barrier Reef yase-Australia ubhekene nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu nanamuhla U-67% wakhe ushonile ezinyangeni eziyisishiyagalolunye ezedlule. Lo mgoqo ubhekane nezinye izikhathi zokukhishwa ngo-1998 nango-2002, kepha iningi labo likwazile ukusinda. Kodwa-ke, kulokhu, imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iya ngokuya icace kakhulu futhi iba yimbi kakhulu yingakho kulokhu ilimele kakhulu.
Lokhu kuvezwe ocwaningweni olwenziwe nguProfessor UTerry uyathula, Umqondisi woMkhandlu Wokucwaninga wase-Australia. Okuwukuphela kwento enethemba ngale nhlekelele yezemvelo ukuthi izingxenye ezimbili kwezintathu zamakhorali aseningizimu yeGreat Barrier Reef zikwazile ukubaleka nomonakalo omncane.
Kepha kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi amakhorali alulame ngemuva kwalesi simo. Ochwepheshe abafunda ukuzinza kwezixhobo zamakhorali eGreat Barrier Reef nsuku zonke balinganisela ukuthi amakhorali azodinga phakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-10 ukwelulama, Ngaphandle kokuthi ukuguquka kwesimo sezulu kushintshe imijikelezo namazinga okushisa amnandi ngokwengeziwe ukuze ukululama kwenzeke ngokushesha okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imithombo yamakhorali ilahlekelwa ngosayizi wayo ongu-67%